Gudoonka Baarlamaanka oo Garab ky Siinayo Madaxweyne Farmaajo Muda Kordhin | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Gudoonka Baarlamaanka oo Garab ky Siinayo Madaxweyne Farmaajo Muda Kordhin
Gudoonka Baarlamaanka oo Garab ky Siinayo Madaxweyne Farmaajo Muda Kordhin
Waxaa wali shaki xoogan laga muujinayaa in sanadka soo socda doorashadii horey loo qorsheeyay ay ka dhaceyso Soomaaliya, waxaana hadal heynta ugu badan noqotay in madaxda talada heysa doonayaan mudo kororsi.
Xildhibaan Maxamuud Beene Beene oo katirsan Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa afduub ku tilmaamay mudada bilka ah uu Gudoonka Baarlamaanka ugu daray guddiga doorashooyinka Qaranka.
“Go’aanadi Shirki Labada guddi joogto waxaa uu aha go’aano qorsheysan oo afduub ah, waliba qodobo sharciga doorashada ah ayaa la jabiyey, Guddoonka ayaa fushaday qorsho ay wateen horayna loogu soo heshiiyey”ayuu yiri Xildhibaan Beenne Beenne
Xildhibaan Beene Beene ayaa sheegay in xubno katirsan gudoonka Baarlamaanka federaalka iyo Madaxtooyada kawada shaqeenayaan in mudo kororsi sameeyaan , waxa uuna tilmaamay damacaasi si weyn uga soo horjeedaan.
Go’aanka mudada bilka loogu kordhiyay guddiga doorashada Qaranka ayaa waxaa walaac ka muujiyay qaar kamid ah wakiilaa beesha Caalamka iyo sidoo kale siyaasiyiinta dowlada Mucaaradka ku ah.
Previous articleMaamulka Shabeelada Hoose oo ka hadlay Dagaaladii ka dhacay Duleydka Degmada Dayniile
Next articleGar gaar deg deg ah oo loowado magaalada Cadaado ee maamulka Galmudug
Madaxwayne Donald Trump oo Amy Coney Barrett u...